I-Semalt Icebisa iWebhu ye-Web Best Best Scraper To Think
I-Selenium yinkqubo yokuvavanya ngokuzenzekelayo yezixhobo zewebhu ezisetyenziselwa ezahlukeneyo iiplani kunye nezikhangeli. I-Selenium inikeza iziseko ze-W3C WebDriver iinkcazo, isixhobo sokuqhagamshelana esilungelelanisiweyo kunye neziphequluli zewebhu. Le software iqukethe iilayibrari ezahlukahlukeneyo kunye nezixhobo ezenza i-web browser ishintshwe.
Kutheni isofthiwe yeSelenium?
Isofthiwe yeSelenium igxininisa kwisicelo esisisiseko se-web ukususa idatha kwiphepha lewebhu - no deposit free credit casino. Le software iqukethe isofthiwe esekelwe ukudibana ye-web scraping iinkcukacha. Isofthiwe yeSelenium inezixhobo ezine eziyinhloko zokuqwalasela.
I-Selenium WebDriver yenzelwe ukunikezela nge-programming interface. Ukuba usebenza ekutshitsheni iphepha lewebhu eliguqukayo, iSelenium-WebDriver liyinxalenye yokuqwalasela. Esi sixhobo sisekela ukukhutshwa kwedatha kwiwebhu kumaphepha ewebhu apho umxholo ungatshintsha ngaphandle kokuphinda ulayishe kwakhona iphepha.
I-WebDriver inikezela isiKhokelo soLungiselelo lweNkqubo yoCwangciso lweSicelo (API) esixhasayo into esinikela ngenkxaso ephakamileyo yokuhlolwa kwewebhu kunye nokukhangela. Isixhobo sisebenza ngokufaka iifowuni kwisiphequluli esebenzisa inkxaso jikelele ngokuzenzekelayo.
Igridi yeSelenium isetyenziswe ngokubanzi ekusasazeni iicatshulwa ngaphezu komshini omnye. Ngamazwi alula, i-Selenium Grid ikuvumela ukuba usebenze iimvavanyo zakho kumashishini ahlukeneyo ahlukeneyo ngokubhekiselele kwisiphequluli esinye. Igridi ikuvumela ukuba usebenze ukukhangela kwimeko yendawo yokuhambisa.
Ixesha liyinto ebalulekileyo xa ifika kwi-web scraping. Akuzange kube lula ukuchoboza iphepha lewebhu elinamandla. Gweba eli phepha ngokukhawulezisa imisebenzi yakho. Unokwenza oku ngokuqhuba iimvavanyo ezininzi ngexesha elinye. Into efanelekileyo malunga nokusebenzisa iSelenium yinyaniso yokuba ungasebenzisa igridi ye-browser efanayo, inguqulelo, kwaye uthayiphe.
ISeleum Control Remote Control (RC)
I-Selenium yoPhuhliso oluHlangeneyo (i-IDE)
I-ID ye-Selenium i-script esebenza njenge-Firefox isandiso esivumela ukuba uhlele, irekhodi,. Kubaqalayo, iiRekhodi ze-IDE ze-Selenium kunye nemidlalo yokusebenzisana ekupheleni komsebenzisi kunye nomshicileli we-Firefox.
isofthiwe yeSelenium iyahambelana nePython 2 kunye nePython 3. Ukuba usebenza ekuqulunqeni umqhubi we-intanethi, uya kufuna ama-32 kunye nama-64-bit-compilers cross and Visual Studio 2008.Ukuqhelanisa neRuby 2 yinto encedisiweyo.
Ukukhangela amaphepha ewebhu kunye neSelenium
Ikhasi lakho elijoliswe kuyo liza kubonisa idatha echongwe emva kokuba zonke iifom zizaliswe ngokufanelekileyo. Amanye amaphepha ewebhu athatha ixesha ngaphambi kokulayisha umxholo. Ukuqhawula olu hlobo lwekhasi, udibanise kuzo zonke iinketho zakho zokuhlahlela, ezifumaneka phantsi kweefom zewebhu ezithile. Kubalulekile ukuqaphela ukuba isofthiwe yeSelenium iyahambelana ne-Windows Operating System, i-Mac OS kunye ne-Linux. Nciphisa iwebhu yakho iphepha lokucoca nge software yeSelenium.